Nari Jibon: Ireo Vehivavy Blaogera sy ny Olan’ny Fanomezana Vodiondry Ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2018 12:17 GMT
Nozaraina voalohany tao amin'ny Rising Voices tamin'ny Desambra 2007
Manoratra i Sufia Khatun ao amin'ny Blaogin'ny Nari Jibon Amader Kotha amin'ny fiteny Bangla momba ny fanateram-bodiondry ho an'ny vady izay mbola mitoetra ho loza mitatao foana eo amin'ny fiarahamonina Bangladeshi. Na efa napetraky ny Lalàna Fandraràna ny Vodiondry tamin'ny 1980 aza ny fanateram-bodiondry ho toy ny hetsika azo saziana mba hisorohana ny famoretana na ny famonoana mihitsy ny vehivavy manambady, dia mbola atao an-tsokosoko manerana an'i Bangladesh ihany.
Mamaritra ilay mpiara-nianatra taminy izay nampanambadiana mpivarokena noho ny rainy tsy nahatakatra ny sandam-bola ho anà vady tsaratsara kokoa. Maneho ny hatezerany izy [bn]:
Tsy mitondra hasambarana ny fahantrana, fa toa mandrava ny fiainana voarindra. Lasa fomba fanao iombonana sy tsy azo ialàna ny vodiondry ao anatin'ny fiarahamonintsika. Mihevitra ireo ray mahantra fa ozona ny fananana zanaka vavy. Tsy maintsy mandany vola be ho an'ny zazavavy izy ireo hatramin'ny fahaterahany; fandaniana ho an'ny zavatra ivelomany, fanabeazana dia inona koa. Mitovy amin'ny zanaka lahy ihany izany, raha tsy mihoatra. Fa mandritra ny fanambadiana dia tsy voatery handalo ny zavatra diavin'ny vehivavy ireo lehilahy.
Lasa fomba fanao ao anatin'ny fiarahamonintsika ny hoe raha toa ka hivady amin'ny lehilahy nahita fianarana ny zanaka vavy, izy (lahy) sy ny tranony dia mila voaravaka tsara (miaraka amin'ny akanjo lava, fanaka sns.). Noho izany dia lasa manambady lehilahy tsy nahita fianarana ny vehivavy nahita fianarana toa an'i Shilpi. Tsy maintsy mijanona ao an-trano izy tsy mampihatra izay zavatra nampianarina azy. Tsy manao afa-tsy izay hampamoy fo ireo zazavavy toa azy izany.
Manontany izy [bn]:
”Mahavoa ny vehivavy rehetra ao Bangladesh ny viriosin'ny vodiondry. Ahoana no hahasitranana amin'izany? Tsy ho afaka amin'ny fahantrana ve i Bangladesh? Tsy ho afaka amin'ny vodiondry mihitsy ve ny vehivavy ao Bangladesh?”
Ao anatin'ny lahatsoratra iray hafa, manoratra mikasika an'i Muna namany i Sherin Sultana, izay nitsoaka niaraka tamin'ny sipany tao anatina raharaha fanitsahana tokantrano. Nasongadiny ny fomba nahafahan'ilay tovolahy sipany hamitaka azy mba hahazoana vola avy aminy sy hampihatra herisetra ara-tsaina sy ara-bola fa tsy ara-batana. Toa tsy mahatakatra ny lojika sy ny fiarovantena ny fitiavana.
Nanontany tena momba ny zavatra ho ataony i Ruma Akhter raha toa ka izy no Praiminisitr'i Bangladesh:
Manana nofinofy ny ho lasa Praiminisitr'i Bangladesh aho. Na faniriana tsy ho tanteraka mihitsy aza izany, fa tena iriako mafy. Raha toa ka hitranga eo amin'ny fiainako izany, dia te-hampiasa izay azo atao rehetra mba hampandrosoana ny firenentsika aho.
Hanolotra fiarahamonina tsy misy fampihorohoroana sy fanaovana kiantranoantrano ho an'ireo vahoaka eto Bangladesh aho. Hiezaka ny hamadika ny kodiaran'ny lahatr'ireo olona idonam-pahantràna aho.
Ny fanabeazana no fepetra fototry ny fampandrosoana. Raha toa ka izaho no Praiminisitr'i Bangladesh, dia hotereko ho an'ny rehetra ny fanabeazana.
Ho an'ny fanamaivanana ny olana tsy fananana asa sy ny fahantrana, haka dingana mahomby vitsivitsy aho, toy ny – hetsika fisantarana amin'ny fanaovana indostria, fampandrosoana ara-pambolena sns. Mba hampandrosoana ny fambolena dia hanandrana ny hampiasa fomba siantifika aho ao amin'ny sehatry ny fambolena.
Ho ezahako hatao izay zavatra rehetra vitako mba hahasambatra sy hampanan-karena ny vahoaka ao amin'ny fireneko. Izany no haniriako – Raha mba Praiminisitra aho!!!
Manjaka any amin'ny firenena mandroso maro ny fanabeazana an-tery ary ny fanabeazana no hery manosika ny fandrosoana. Tsy misy firenena afaka ny handroso raha tsy afaka mahatakatra ny kilemany. Azoko antoka fa ho Praiminisitra feno fahombiazana izy ary, raha ny marina, efa nanana vehivavy roa Praiminisitra i Bangladesh.
Nankalazain'ny Nari Jibon ny andro nahaterahan'ny mpanorina azy, Dr Kathryn B. Ward, ilay olona tao ambadiky ny Nari Jibon. Nanoratra ny fankasitrahany tamin'ny fandraisana ny Profesora Ward toy ny ‘reniny’ i Mayanur Akhter ary namaritra kely ny zavatra ataon'ny tetikasa Nari Jibon.
Zarain'ny mpampianatra Taslima Akhter ny lahatsary-tafatafa iray niarahana tamin'ny Monwara Begum izay niharana herisetra an-tokantrano taorian'ny fanambadiany : Vakio eto ny fndikàna ho soratra.
Mombamomban'ny blaogera ao amin'ny Nari Jibon maro hafa no nozaraina tsy ela akory izay.
Nandritra ny fihaonambe in-droa izambolana mahazatra ny Nari Jibon tamin'ny 8 Desambra 2007, noresahan-dry zareo ny momba ny fivoarany sy ireo lahatsoratra am-bilaogy, ary ireo fampiofanana ho avy eo. Soritsoritan'i M.G. Rabbany Sujan, mpikambana ao amin'ny mpiasan'ny Nari Jibon, ny fomba fiasan'ny Nari Jibon amin'ny maha-mpanome fahaizamanao ho an'ny vehivavy ao Dhaka.
Afaka mirehareha soa aman-tsara amin'ireo fahombiazany ireo ny Nari Jibon.